Jigjiga Iyo Warshada Saabuunta ee Tayo Oo Xadhiga Laga Jaray - Cakaara News
Jigjiga Iyo Warshada Saabuunta ee Tayo Oo Xadhiga Laga Jaray
Jigjiga(cakaaranews)Arbaco 9ka November 2016. Waxaa Deegaanka Kusoo badanaya warshadaha iyo maal gashiyada kaladuwan iyadoo maantana magaalada jigjiga si rasmi ah xadhiga looga jaray warshada saabuunta iyo shaambooda soosaarta oo lagu magaacabo warshada saabuunta ee Tayo islamrkaana 2000 oo litter soo saaraysa maalin kasta oo isugu jirta saabuunta dharka, saabuunta jidhka iyo waliba saabuunta lagu nadiifiyo suuliyada.
Hadaba, Xadhig kajarkii warshadan saabuunta oo ay kasoo qaybgaleen maareeyaha wakaalada horumarinta shirkadaha yaryar, maareeye kuxigeenka wakaalada micro finance mudane khaddar Axmed Cabdi, madaxa xafiiska shirkadaha yaryar ee maamulka magaalda jigjiga mudane cabdulaahi cabdi cilmi, shaqaalaha shirkada iyo waliba marti sharaf kale. Waxaana ugu horayn kahadlay Maareeyaha horumarinta shirkadaha yarayar mudane Cabdi Muxumed Cismaan oo sheegay in uu aad ugu faraxsanayhay in maanta ay xadhiga kajaraan warshada saabuunta tayo oo ah warshadii 2aad ee saabuunta ee laga dhiso magaalada jigjiga. Wuxuuna intaa kudaray in shaqo abuurka dhalinyaradu ay yihiin qorshayaasha ugu horeeya ee dalkeenu qaatay tanina ay qayb katahay dadaalada balaadhan ee ay xukuumada DDSI ugu jirto ladagaalanka saboolnimada.
Sidookale waxaa isna dhinaciisa kahadlay Maareeyaha Guud ee Warshada Saabuunta Tayo mudane Xasan Axmed Macalin oo sheegay in warshadani ay tahay mid ay dadaal balaadhan ugaleen islamarkaana xukuumada iyo haayadaha ay qusayso ay la garab istaageen taageero hiil iyo hooba leh. Wuxuuna xusay masuulku in ay yihiin dhalin yaro iskaashatay oo fikir iyo hal abuur latimid dawladuna garab istaagtay iyadoo la amaahiyay lacag kor u dhaafaysa 500 000 birr. Maareeyaha oo hadlkiisa sii wata ayaa tilmaamay in ay ku hanwayn yihiin inay latartamaan warshadaha saabuunta ee dalka ugu waawayn islamrkaana ay gaadhayaan heer sare oo ah warshad wayn shaqo abuura ay usamayn doonaan boqolaal dhalin yara ah mustaqabalka.
Wuxuuna ugu horayn amaan iyo mahad celin usoo jeediyay madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamuud cumar, wakaalada horumarinta shirkadaha yaryar, iyio waliba wakaalada Somali micro finance. Oo si balaadhan uga taageeray dhankasta.
Ugudanbayna shaqaalaha warshada oo dareenkooda kahadlay ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin warshadan.islamrkaana ay aad ugu mahadcelinayaan qofkasta oo dadaal ka gaystay hirgalka warshadan.